Muxuu Memphis Depay ka yiri inuu kulankiisii ugu horreeyey u ciyaaray Kooxda Barcelona? – Gool FM
(Barcelona) 25 Luulyo 2021. Memphis Depay ayaa ka hadlay kulankiisii ugu horreeyey oo uu ciyaaray kooxdiisa cusub ee Barcelona, waxaana uu xisay inuu cajiib ku dareemayo inuu ku ciyaaray maaliyadda Barca.
Ciyaaryahan Memphis Depay ayaa helay daqiiqadihii ugu horreeyey ee uu dheelo isagoo xiran Maaliyadda Kooxda Barcelona, kulankii xalay ay guusha 3-1 ka gaareen Girona, isagoo xitaa goolasha saddexaad dhaliyey, kaasoo ahaa rigoore.
Xiddiga reer Holland oo warbaahinta la hadlay kulankaas kaddib ayaa u mahadceliyey xiddigaha ay isku kooxda yihiin waxaana uu cajiib ku tilmaamay inuu ku ciyaaro maaliyadda Barcelona.
“Waxa aan dareemayaa wax cajiib ah in aan ku ciyaaro Maaliyaddaaan,” ayuu u sheegay Website-ka rasmiga ah ee Kooxda Barcelona.
“Waxa ay aheyd mid adag, daqiiqadihii ugu horreeyay ee ciyaarta, laakiin runtii waan ka helay, saaxiibadeyda kooxduna waa ay i caawiyeen.
“Aad ayaana uga helay.”
Bayern Munich oo xiiseynaysa mid ka mid ah Weeraryahannada Kooxda Chelsea... (Miyey Blues ka iibin doontaa?)